R/wasaare Gaas oo ka jawaabay hadalka madaxwayne Shariif ee ahaa golaha xukuumaddu inaysan go\_’aan soo saari karin – Radio Daljir
Agoosto 17, 2012 4:36 b 0
Muqdisho, Aug 17 – Raysalwasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegey in aysan jirin macne loo yiraahdo xukuumaddu saameyn ma yeelan karto, Xukuumaddu waa jirtaa, Madaxweynuhu waa jiraa ilaa xukuumad cusubbedesho ayuu yiri Dr.Gaas mar uu waraysi siinaayey Idaacadda VOA.
Raysalwasaaraha ayaa mar la weydiiyey sababta uu uga horyimid degmooyina gaaraya 7-da ee Madaxweynhu digreetada ku soo saarey ayuu sheegey in magacaabista Gobolada ama degmooyinka ay tahay in ay soo marto golaha wasiirada ka doodaan kadib ay gudbiyaan Madaxweynaha mana dhicin taasi, wixii sidas lagu magacaabano waa sharci darro.
Raysalwasaaraha oo la weydiiyey in dadka qarkiis ku doodayaan mar haddii uu musharax yahay in uu xafiiska wareejiyo ayuu sheegey in aysan ahayn taasi mid dastuuri ah hawsha ay wadayaan ilaa xukuumad cusub oo bedesha ay timaado.
Dr.Gaas ayaa mar la weydiiyey in ay farogelin ku hayaan soo xulida Xildhibaanada iyo waxa uu doodaas uga jawaabayo ayaa sheegay in aysan jirin wax shaqo ah oo uu ku lee yahay soo xulitaanka Xildhibaanada, ?Cadbiweli ahaan aanu marna gacanta lama gelin hawsha Guddiga Farsamada soo xulitaanka, cidii lagu tuhmey haka jawaabto ayuu yiri?
Khilaafka isaga iyo Madaxweynaha u dhexeeya ayu ku tilmaamey in aysan jirin wax xumaan ah oo dhexyaala isaga iyo madaxweynaha ee waxa keliya oo la isku qaban karaa ay tahay nidaamka Dawliga ah.
Arintan ayaa ku soo beegmaysa xili uu sheegay madaxwayne Shariif dhowaan? mar haddii raysalwasaaruhu musharax yahay ay xukuumaddu saameyn beelayso, wax qaraar ahna aysan soo sari karin isaga oo jawaab uga dhigaaya diidmada ay Xukuumaddu kala hortimid magacaabida degmooyin uu Madaxweynuhu ka magacaabey qaar kamid ah Gobolada dhexe iyo kuwa koonfureed taas oo u muuqata mid ka mid ah ololihiisa siyaasadeed.
Xaaladda deegaano hoos taga degmada Xudur oo dagan ka dib dagaalo ka dhacay xalay.